China PSA okisijeni concentrator / Psa Nitrogen Chirimwa chiri kutengeswa Psa Nitrogen jenareta vagadziri uye vanotengesa | KANA
PSA okisijeni concentrator / Psa Nitrogen Chidyo chiri kutengeswa Psa Nitrogen jenareta
Oxygen igasi rinokosha rekutsigira hupenyu hwepasi, hwakakosha muchipatara, oxygen oksijeni inoita basa rakakosha kuponesa varwere.
ETR PSA Medical Oxygen Plant inogona kuburitsa mwero wezvekurapa oxygen kubva mumhepo zvakananga. ETR Chiremba Oxygen Sisitimu inosanganisira Atlas Copco mweya compressor, SMC yakaoma uye mafirita, PSA okisijeni chirimwa, buffer matangi, humburumbira manifold system. Iyo HMI yekudzora kabhodhi uye APP yekutarisa system rutsigiro rwepamhepo uye kure yekutarisa.
Yakadzvanywa mweya inonatswa kuburikidza neyekuomesa mweya uye mafirita kune imwe nhanho ye main jenareta yekushanda nayo. Mhepo buffer inosanganisirwa kuitira kutsetseka kwemweya wakamanikidzwa nekudaro kudzikamisa kuchinjika kwemhepo yakamanikidzwa. Iyo jenareta inogadzira okisijeni nePSA (kumanikidza swing adsorption) tekinoroji, inova nguva yakasimbiswa oksijeni yekugadzira nzira. Okisijeni yekuda kuchena pa93% ± 3% inoendeswa kune okisijeni buffer tangi yekutsetseka kupihwa kwechigadzirwa gasi. Okisijeni mune buffer tank inochengeterwa pa4bar kumanikidza. Iine okisijeni booster, iyo oxygen yekurapa inogona kuzadza masilinda ane 150bar kumanikidza.
PSA okisijeni jenareta chirimwa chakagadzirwa uchishandisa advanced Pressure Swing Adsorption tekinoroji. Sezvazvinozivikanwa, okisijeni inogadzira yakatenderedza 20-21% yemhepo yemuchadenga. PSA okisijeni jenareta yakashandisa Zeolite mamorekuru sieve kupatsanura iyo oxygen kubva mumhepo. Oxygen ine yakachena kuchena inonunurwa nepo iyo nitrogen inofinhwa nema molecular sieve inotungamirwa kumashure mumhepo kuburikidza neyekuneta pombi.
Kumanikidza swing adsorption (PSA) maitiro anoumbwa nemidziyo miviri izere nema molecular sieve uye akaiswa alumina. Yakadzvanywa mweya inopfuudzwa kuburikidza nechimwe mudziyo pamadhigirii makumi matatu C uye okisijeni inogadzirwa sechigadzirwa gasi. Nitrogen inoburitswa semweya wekubvisa kudzokera mumhepo. Kana iyo mamorekuru nesefa mubhedha izere, maitiro acho anochinjiswa kune mumwe mubhedha ne otomatiki mavharuvhu e oxygen chizvarwa Izvo zvinoitwa uchitendera mubhedha wakazara kuti ugadziridzwe nekuora mwoyo uye kuchenesa kumhepo yekumhepo. Midziyo miviri inoramba ichishanda neimwe nzira mukugadzira okisijeni uye kumutsiridzwa ichibvumira okisijeni kuti iwanikwe mukuita.
Zvishandiso zvePSA Zvirimwa
Yedu PSA oksijeni jenareta zvidyarwa zvinoshandiswa pamazhinji maindasitiri anosanganisira:
Mapepa uye Pulp maindasitiri eOxy kuchenesa uye kusarudzika
Maindasitiri egirazi ekuvandudza kwevira
Metallurgical maindasitiri ekuvandudza okisijeni maficha
Makemikari maindasitiri ekuchinja kweiyo oxidation uye eanopisa
Kuchenesa nemvura uye nemvura yakachena
Simbi gasi rinotyisa, kutema uye brazing
Pashure: Maindasitiri Akakwira Kukosheswa Psa Oxygen jenareta PSA Oxygen Dura
Zvadaro: Industrial Scale PSA Oxygen Concentrator Oxygen kugadzirwa Kwekudyara zvine zvitupa